जाडोमा किन पर्छ कपालमा चाया ? कारण र समाधानका उपायहरु यस्ता छन - ramechhapkhabar.com
जाडोमा किन पर्छ कपालमा चाया ? कारण र समाधानका उपायहरु यस्ता छन
जाडोमा कपालको हेरचाह गर्नु निकै जरुरी हुन्छ । जाडोमा चिसो हावाको असर कपालमा पनि पर्छ । चिसो हावाले टाउकोको आर्द्रता हटाउँछ, जसका कारण कपालमा चायाको समस्या बढ्न थाल्छ र कपाल सुख्खा देखिन थाल्छ। यदि तपाइँ जाडोमा चायाँबाट बच्न कस्मेटिक उत्पादन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यसले तपाइँको कपालमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ। कपाललाई चायाबाट छुटकारा दिन कस्मेटिक उत्पादनको सट्टा आयुर्वेदिक उपाय अपनाउनुपर्छ ।
आयुर्वेदिक उपचार गरेर चायाबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । आयुर्वेदिक उपचार गर्नाले चायाबाट छुटकारा पाउनुका साथै कपाललाई बलियो र चम्किलो बनाउन सकिन्छ । आयुर्वेदका अनुसार कपालमा चायाबाट उपचार कसरी गर्ने भन्ने बारे जान्नुहोस्।
चायाबाट बच्ने उपाय
चायाबाट बच्न स्वस्थ खाना खानुहोस्ः खानामा भिटामिन बी, जिंक र ओमेगा ३ फ्याटी एसिडको कमीका कारण टाउकोमा चायाको समस्या हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चायाबाट बच्न आहारमा मौसमी तरकारी, अण्डा, माछा, केरा र पालकजस्ता खानेकुरा खानुपर्छ । तरबुजा र अंगूरजस्ता फलफूल पनि कपाल बलियो राख्नका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
भिटामिन सी प्रयोग गर्नुहोस्ः अमलामा भिटामिन सी प्रचुर मात्रामा पाइन्छ जसले चाया र कपाल झर्ने समस्याको उपचारमा मद्दत गर्छ । भिटामिन सी एक बलियो एन्टिअक्सिडेन्ट हो, जसले फ्री रेडिकलहरूको गतिविधिलाई रोक्न काम गर्छ र यसरी चाया देखि कपाल झर्ने समस्याहरू समाधान गर्दछ।
दहीको साथमा चायाको उपचार गर्नुहोस्ः प्रोटिनले भरपूर दही टाउकोलाई स्वस्थ राख्न निकै प्रभावकारी हुन्छ । यसले फालिकल्सको विकास मा मद्दत गर्छ। कपालमा १५ मिनेट दही लगाउनुहोस् र त्यसपछि स्याम्पुले कपाल धुनुहोस्। तपाईको कपाल नरम नरम र चम्किलो हुनेछ।
प्याजको रस प्रयोग गर्नुहोस्ः चायाबाट छुटकारा पाउन प्याजको रस पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्याज काटेर पिसेर यसको रस अलग गर्नुहोस्। अब कपासको सहयोगले टाउकोमा रस लगाउनुस् । केही समय राखेपछि स्याम्पु गर्नुहोस् ।